Deep Freeze — MYSTERY ZILLION
Deep Freeze မှာ ဘယ်Drives တွေကို freeze လုပ်ထားလဲဆိုတာ ဘယ်လိုပြန်ကြည်.ရလဲမသိလို.ပါ။ ကူညီပေးကြပါခင်ဗျာ။ C ကိုပဲ freeze လုပ်မိတာလား၊ Drives အားလုံးကိုပဲ freeze လုပ်မိတာလား မသဲကွဲတော့လို.ပါ။
Deep Freeze အသုံးပြုနည်း
Deepfreeze က အင်စတောလုပ်ချိန်မှာ drive နှစ်ခုလုံးကို အုပ်ထားပါတယ် ကိုကသာ ရွေးပေးရတာပါ ဘယ်မှာ အုပ်ထားလဲ သိချင်ရင် သိချင်တဲ့ အပိုင်းမှာ ဖိုင်တစ်ခုလောက် ဆောက်ကြည့်ပါ ပြီးရင် restart ချကြည့်လိုက်ပါ အဲ့ဒီနေရာကို ပြန်ကြည့်လိုက်ပါ ကိုယ်ဆောက်တဲ့ဖိုင်ရှိသေးတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီအပိုင်းမှာ အုပ်မထားဘူးဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ် အကယ်၍ မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ Deepfreeze နယ်ထဲမှာ သူရှိတယ်လို့သာမှတ်ပါ အဲ့ဒါဆိုရင် ဘယ်အပိုင်းမှာ အုပ်ထားလဲ မအုပ်ထားလညး်ဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ် . C:\_ ကိုပဲ အုပ်ချင်ပြီး \_ကိုပြန်ဖြုတ်ချင်ရင်တော့ ဆော့၀ဲ တစ်ခုလုံးပြန်အင်စတောလုပ်မှရမယ်နဲ့တူပါတယ် စမး်တော့ မကြည့်ရသေးပါဘူး .:103::103:
Deepfreeze ကို ဖြုတ်ချင်ရင်တော့Undeepfreeze ဆိုတဲ ့software ရှိတယ်ခင်ဗျ
အခု ဆိုရင်တော့version6လောက် ထိ ထွက်နေပါပြီ
အရင်တုန်းက တော ့လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ဖူးတယ်ခင်ဗျ.အခုတော့Virus ကိုက်လို ့လစ်ကုန်ပြီ
ကို ဂေလ်းဖင်ကားဆီမှာတော ့ကျန်သေးတယ်ထင်တယ်..
Deep Freeze ကို install လုပ်တဲ့အခါမှာ C ကိုဘဲလုပ်မှာလား C/D ကိုလုပ်မှာလားလို့ရွေးလို့ရတယ်လေ။
ဒီမှာ . http://www.4shared.com/file/130642369/e9019f9d/Deepfreeze_fullrar.html
deepfreeze ကော undeepfreeze ကော ပါ သုံးချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ Guide file လေးကောပါပါတယ် စမ်းကြည့်ပေါ့ ဖြုတ်ချင်ရင်လည်း သုံးကြည့်ပေါ့ဗျာ အဆင်ပြေကြမယ်ထင်ပါတယ်
ပြန်ဖြုတ်ရတာလွယ်ပါတယ်။ Install လုပ်တဲ့ exe file ကိုပဲပြန် Run ရင် Uninstall လုပ်လို့ရပါတယ်......။
Defreez နဲ့ HD Guard ဘယ်ဟာ ပိုကောင်းမယ်ထင်လဲ........?
sirdway wrote: »
့HD Guard ကvirus မ၀င်ဘူသေဘူ
ဆက်တင်တွေမပျောက်စေမယ့် Deep Freeze ဆော့ ဖ်၀ဲ
ကိုယ့် ရဲ့ ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဆက်တင်တွေကို တစ်စုံတစ်ယောက် က စရင်းနောက်ရင်း ပြင်သွားတဲ့ အခါမျိုး ၊ တခြားဆော့ဖ်၀ဲတွေကို install လုပ်သွားတဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ ကိုယ့်ရဲ့ စက်ကို ထားခဲတဲ့ အခြေအနေတိုင်း ပြန်ပြီးရှိစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Deep Freeze ဆိုတဲ့ ဆော့ဖ်၀ဲလေးက ကူညီပေးနိုင်ပါမယ်...
Deep Freeze ဆိုတာ ကွန်ပျူတာထဲမှာ တခြားသူတွေ ဘယ်လိုဘဲ ၀င်ရောက်ပြင်ဆင်လိုက်ပေမယ့် restart ချလိုက်လို့ စက်ပြန်တက်လာတဲ့အခါမူလရှိတဲ့ ၀င်းဒိုးရဲ့ အခြေအနေတိုင်း ကိုယ့်ရဲ့ စက်တင်တွေကို မပျောက်မပျက်ရှိနေအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ ဆော့ဖ်၀ဲတမျိုးပါ Deep Freeze မှာ Frozen နဲ့ Thawed ဆိုပြီး အဆင့် နှစ်ဆင့် ရှိပါတယ်။ Frozen ကိုရွေးထားရင် စက်ကို restart ပြန်လုပ်လိုက်တဲ့အခါ ပြင်ဆင်ထားခဲ့ သမျှတွေအားလုံး Deep Freeze ကဖျက်လိုက်ပြီး မူလအခြေအနေကိုပြန်ရောက် သွားစေပါတယ် Thawed ကိုရွေးထားမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်စိ်တ်ကြိုက် ဆက်တင်တွေကို ပြင်ဆင်နိုင် install လုပ်နိုင်ပါတယ်...
ဒါပေမယ့် စက်ထဲမှာရှိတဲ့ ဆော့ဖ်၀ဲ တွေကို update လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ Thawed အနေ ကို ရွေးထားဖို့ လိုပါတယ်။ DF6Std.exe ဖိုင်ကို ကလစ် နှစ်ချက်လောက် ခေါက်လိုက်ရင် installation dialog ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်...
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Drive ကို Freeze လုပ်နိုင်ပေမယ့် Drive အားလုံးကို လုပ်ထားရင်ပိုကောင်းပါတယ်....
Deep Freeze ကို install လုပ်နေစဉ်တွင် antivirus ဆော့ဖ်၀ဲ နဲ့ အခြား program တွေကို ပိတ်ထားဖို့ လိုပါတယ် ထုံးစံအတိုင်း ပေါ်လာတဲ့ အဆင့် တိုင်း install လုပ်ပါ..စက်ပြန်တက်လာတဲ့ အခါမှာ Deep Freeze program ထဲ ၀င်နိုင်ဖို့ password တောင်းတဲ့ screen တစ်ခုပေါ်လာပါမယ် ဒါပေမယ့် အဲဒီ screen ဟာ 10 seconds ပေါ်ပြီးပြန်ပျောက်သွားမှာပါ..10 seconds အတွင်း password ရိုက်မထည့်ခဲရင်လည်း နောက်ပြန်ပြီး password ထည့်လို့ရပါတယ်...
Deep Freeze program ကို ကိုယ့် ရဲ့ စက်ကနေ ပြန်ပြီး ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ Thawed ကိုပြန်ရွေးထားရပါမယ်..
Deep Freeze program ကို လိုအပ်သလို ပြောင်းလဲနိုင် ဖို့ နည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိပါသည်..SHIFT ကီးကို ဖိထားပြီး Deep Freeze icon လေးကို ကလစ် နှစ်ချက်ခေါ်က်လိုက်ပါ...
ဒါမှမဟုတ် ကီးဘုတ်က CTRL+SHIFT+ATL နဲ့ F6 ကို တွဲနှိပ်လိုက်ရင် password တောင်းတဲ့ dialog box ပေါ်လာမယ်..ကိုယ့်ရဲ့ password ကိုရိုက်ထဲ့ ပါ..
Password သတ်မှတ်မထားခဲ့ရင် ဘာမှမရိုက်ဘဲ ok ကို နှိပ်လိုက်ပါ..Boot Control, Password, Clone ဆိုတဲ့ tabs သုံးခုနဲ့ Deep Freeze dialog box ပေါ်လာမယ်...
Boot Control tab ကတော့ Deep Freeze ကို အသုံးပြု ဖို့ ဖြစ်ပြီး password tab ကတော့ Deep Freeze program ထဲ ကို သူများတွေ မ၀င်နိုင် မပြောင်းနိုင်ဖို့ အတွက်ပါ....Clone tab ကတော့ registry setting file ကို ကော်ပီပွားနိုင်ဖို့ အတွက်ပါ...
Deep Freeze program အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင် start menu bar ရဲ့ နာရီဘေးမှာ Frozen icon လေးပေါ်နေမှာပါ..program ကို အလုပ်မလုပ်အောင် ရပ်ထားတယ်..Thawed ကိုရွေးထားတယ်ဆိုရင်တော့ Frozen icon ပေါ်မှာ အနီရောင် ကြက်ခြေခတ် တစ်ခုပေါ်နေမယ်...
4MB နီးပါးသာ ရှိပါတယ်..Deep Freeze ဆော့ဖ်၀ဲ ကို အင်တာနက်ဆိုင်တွေ ၊ ကွန်ပျူတာသင်တန်းတွေ အပြင် IT စိတ်၀င်စားတဲ့ သူတွေတော့ သိပြီး ၊ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ အခု ကျွန်တော် ပြန်တင်ပေးလိုက်တာ ကလဲ မသိသေးသူများအတွက်ပါဗျာ..ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ရဲ့ စက်တင်တွေကို စိတ်ချနိုင်ဖို့ အတွက်ဆိုရင် Deep Freeze ဆော့ဖ်၀ဲ က တစ်ဖက်တစ်လှမ်းကနေ ကူညီပေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်
program ကို disable အရင်မလုပ်ပဲ uninstall လုပ်လို့ပါ။
အရင်ဆုံးအဲဒီ program ကို disable လုပ်ပါ။ DF က အလုပ် လုပ်နေရင် icon tray အနေနဲ့ရှိနေပါတယ် ။ shift ကိုနှိပ်ထားပြီး icon ကို double click ပါ။ box တစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်၊။ အဲဒီမှာ Thawed ဆိုတဲ့ mode ကိုပြောင်းလိုက်ပါ ။ ပြီးရင် ကျွန်တော်ပြောသလိုuninstall လုပ်ကြည့်ပါ
ဘယ် Drive တွေကို ချုပ်ထားလဲ ဆိုတာဒီလိုလေးစမ်းကြည့်လိုက်ပါလား
ကွန်ပျူတာဖွင့်ပီးပီးချင်း ရှိသမျှ Drive တွေထဲမှာ New Folder တွေဆောက်ပီးရင် Restart ချကြည့်လိုက်ပါ။
အဲ Deepfreeze ကိုတော့ Froozen လုပ်ပီးမှစမ်းရမှာနော်
Deep Freeze Standard 6.00.020.1523.exe uninstrall လေးရှိရင်တင်ပေးစေလိုပါတယ်
thaung.mdy wrote: »
Deep Unfreezer 1.6 ပါ သုံးတတ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် ..
အဲဒါကို Run ပြီး .. Boot Thawed ကိုရွေးပြီး save status ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ.. ပြန်တက်လာရင် ..Task Manager ရဲ့ Process Tab ကိုသွားပြီး .. deep freeze ကို End Process လုပ်ပြီး .. ဖိုင် location ကို သွားဖျက်လို့ရပါပြီ.. Restart လုပ်လိုက်ရင် .. Deep Freeze ပျက်သွားပါပြီ..
deep freeze not detected လို့ပြနေပါတယ်........
ပြန်ပြီး Thaw လုပ်လို့မရပါခင်ဗျာ.......................
version ကတော့ 6.30.050.1818 ဖြစ်ပါတယ်......